တူဒို့ဂ ဗဓူဒွေယဲ 1%? Occupy the Wall Street ! | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Money & Finance » တူဒို့ဂ ဗဓူဒွေယဲ 1%? Occupy the Wall Street !
တူဒို့ဂ ဗဓူဒွေယဲ 1%? Occupy the Wall Street !
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 21, 2011 in Money & Finance, U.S. News, World News | 10 comments
အမေရိကန် ရေပေါ်ဆီ ဝင်ငွေပြဂရပ်ဖ် - စီအန်အန်သတင်း
အမေရိကန်နိုင်ငံမှ စတင်လိုက်တဲ့ ဝေါစထရိသိမ်းပိုက်ရေး လှုပ်ရှားမှု Occupy Wall street ဟာ အခုဆိုရင် အခွင့်ရေး တောင်းဆိုလှုပ်ရှားသူ၊ အလုပ်သမားသမဂ္ဂများရဲ့ အားပေးထောက်ခံမှုနဲ့ ကမ္ဘာတလွှား မြို့ကြီးများကို ပျံ့နှံ့သွားပြီး အရှိန်အဟုန်နဲ့ ချီတက်လျက်ရှိပါတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းပြည်တွေမှာ ဖြစ်နေတဲ့ ရေရှည်စီးပွားရေးကျဆင်းမှု အခြေအနေဆိုးကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေတာပါ။ လှုပ်ရှားမှု ကြွေးကျော်သံကတော့ “ငါတို့သည် ၉၉ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်။” ဒီနေ့ စီအန်အန်မှာ စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းတပုဒ် ဖတ်ရပါတယ်။ http://money.cnn.com/2011/10/20/news/economy/occupy_wall_street_income/index.htm?hpt=hp_t2
အမေရိကန်နိုင်ငံသား အခွန်ထမ်းများရဲ့ တစ်ရာနှုန်းဖြစ်တဲ့ အချမ်းသာဆုံး ရေပေါ်ဆီလူတန်းစား အလွာထဲဝင်ဖို့ ဒေါ်လာတသန်း နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရှိမှ ဖြစ်မယ်လို့ထင်နေရင် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ပါအုံး။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်တဲ့ အခွန်ဦးစီးဌာန စာရင်းကိန်းဂဏန်းများအရ နှစ်စဉ်ဝင်ငွေ ဒေါ်လာ၃၄၃၉၂၇ ရှိဖို့သာ လိုပါတယ်။ ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများကတော့ ရေပေါ်ဆီ၁%ကြောင့် ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာချက်ကြီးထွားရတာလို့ ဆိုနေကြ ပါတယ်။ ဒါဆို မောင်ကံကောင်း မယ်ကံကောင်းများဟာ ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မလဲ။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ထောင်စု ၁.၄သန်းသာ လူချမ်းသာစာရင်း ဝင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည် ဝင်ငွေရဲ့ ၁၇%ရှိပြီး အကြမ်းအားဖြင့် ဝင်ငွေခွန် ၃၇% ပေးဆောင်ပါတယ်။ တစုတဝေးထဲပြောရင် အခွန်မနှုတ် ရသေးခင် သူတို့ဝင်ငွေသည် ဒေါ်လာ၁.၃ ထရီလီယံဖြစ်တယ်။ အထက်မှာပြောခဲ့တဲ့ ဒေါ်လာ ၃၄၃၉၂၇သည် အခွန်မဆောင်ရသေးတဲ့ အနည်းဆုံးဝင်ငွေဖြစ်ပြီး ပျမ်းမျှအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၉၆၀၀၀၀ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီ ရေပေါ်ဆီလူတန်းစား ဝင်ငွေသတ်မှတ်ချက်ဟာ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးအတက်အကျအပေါ် မူတည်ပြီး နှစ်စဉ် အပြောင်းအလဲ ရှိပါတယ်။
ဝေါစထရိရှယ်ယာဈေးကွက် ခေတ်ကောင်းချိန် ၂၀၀၇တုန်းကဆိုရင် လူ့မလိုင်၁%စာရင်းဝင်ဖို့ အခွန် မဆောင်ရသေးခင် ဒေါ်လာ၄၂၄၀၀၀ကျော် ဝင်ငွေရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်များအတွင်း စတော့ ဈေးကွက် ကျဆင်းမှုများက အဲဒီဝင်ငွေသတ်မှတ်ချက်ကို ၂၀၀၂ခုနှစ်မတိုင်ခင် အဆင့်ကို ပြန်တွန်းပို့ထားတယ်။ “ပိုမြင့် သွားလေလေ ကွာဟချက် ပိုကြီးတာတွေ့ရလေ” “သိပ်ကြီးမား ကျယ်ပြန့်လွန်းတဲ့ စတော့ခ်ဈေးကွက်ထဲမှာ သူတို့ရဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို မြှုပ်နှံထားကြတယ်။” ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမြတ်အစွန်းများမှ ချမ်းသာကြွယ်ဝ လာသလို ဘောနပ်စ်ဆုကြေးများကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်မျိုးတွေလည်းဆိုရင်…….
နယူးယောက်မြို့က အာမခံစာချုပ် အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန္ဒပြနေရာ ဇက်ကိုတီပန်းခြံမှ ဘလောက်အနည်းငယ်သာခြားတဲ့ နေရာတွေမှာ အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ သကောင့်သားတွေရဲ့ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာ ၃၁၁၀၀၀ကျော် ရှိပါတယ်။ သီးခြားလေ့လာမှုတခုမှာ ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍဟာ ၂၀၀၅ခုနှစ် ထိပ်ဆုံးအဆင့် ဝင်ငွေရှိသူများရဲ့ ၁၄%ဖြစ်ပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေးလုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိတဲ့ အလုပ်များက အမှုဆောင်အရာရှိ၊ မန်နေဂျာ၊ ကြီးကြပ်ရေးမှူးများက အများစုဖြစ်တဲ့ ၃၁%၊ ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်များက ၁၅.၇%နဲ့ ရှေ့နေများက ၈.၄% ဖြစ်ကြပါတယ်။
အချိန်နဲ့အမျှ ထိပ်ပိုင်း၁%ဟာ စုစုပေါင်းဝင်ငွေရဲ့ ပိုကြီးတဲ့အစိတ်အပိုင်းကို သိမ်းပိုက်လာတာပါ။ ၂၀၀၇ခုနှစ်မှာ သူတို့ဟာ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေရဲ့ ၂၂.၈% ရရှိခဲ့ပြီး ၁၉၈၆ခုနှစ်ထက် နှစ်ဆကျော်ပိုများတယ်။ ၂၀၀၉ခုနှစ်မှာတော့ စီးပွားရေးကပ်ကြောင့် ၁၇%သို့ ဝေစုကျဆင်း သွားခဲ့တယ်။
လူချမ်းသာများရဲ့ ဝင်ငွေထိုးတက်နေချိန်မှာ လူလတ်တန်းစားများ ဝင်ငွေကတော့ ရပ်တန့်နေတယ်။ ဝင်ငွေဖြန့်ခွဲမှု ဇယားထိပ်ပိုင်းကိုရောက်သွားလေလေ ဝင်ငွေမြင့်တက်လေလေ၊ စုစုပေါင်းဝင်ငွေ အစိတ်အပိုင်း အများစု အဲဒီအုပ်စုထဲ ရောက်သွားလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများရဲ့ အမြတ်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုများ မြင့်တက်လာပေမဲ့ အလုပ်သမားတွေကတော့ အကျိုးကျေးဇူး မခံစားရဘူးလို့ နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပါမေက္ခတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ နိုင်ငံအနှံ့ ပြန့်ပွားနေတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပေါက်ကွဲထွက်ဖို့ မီးစဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
တိုးတက်လာတဲ့ ဝင်ငွေတွေအားလုံး အထက်ကိုပဲသွားနေရင် ကျန်သူများအတွက် ရဖို့များများစားစား မရှိတော့ခြင်းက လူတွေကို အကြောင်းအချက် ခိုင်လုံစွာနဲ့ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက် နေစေပါတယ်။
By Tami Luhby @CNNMoney October 20, 2011: 10:40 AM ET
NEW YORK (CNNMoney) — Think it takesamillion bucks to make it into the Top 1% of American taxpayers?
Well, there were just under 1.4 million households that qualified for entry. They earned nearly 17% of the nation’s income and paid roughly 37% of its income tax.
In 2007, when times were good on Wall Street, one needed to have an adjusted gross income of more than $424,000 to get into the highest rank. But the stock market decline in recent years has helped lower that bar back toalevel not seen since 2002.
“The further up you go, the wider swings you see,” said Pete Sepp, spokesman for the National Taxpayers Union. “They haveagreat deal of wealth sunk into the markets, which can vary quite widely.”
While much of the wealthy’s income comes from capital gains on investments, bonuses on the job can also give people the needed boost.
Just what jobs are those?
These folks, many of whom work only blocks from where protesters are gathering in Zuccotti Park, made an average salary of just over $311,000 in 2009, according to the state Comptroller’s Office. (This figure does not take into account certain income, losses and deductions that make up adjusted gross income.)
A separate study found that financial professionals made up about 14% of the top rank in 2005.
Over time, the Top 1% has claimedabigger share of the income pie. In 2007, they earned 22.8% of the nation’s income, more than double the amount in 1986, according to IRS data. The recession has since brought that slice down to just under 17% for 2009.
While those at the top have seen their incomes soar over time, middle-class incomes have stagnated.
“The higher up the income distribution you go, the more your income rose and the larger the share of total income gains went to your group,” said Roberton Williams,asenior fellow at the nonpartisan Tax Policy Center.
But as corporate profits and productivity have increased, workers aren’t reaping the benefits, said Edward Wolff,aNew York University economics professor who specializes in income inequality. That’s helping spark the movement, which has spread across the country.
“There isalot of anger and it’s foravery good reason,” Wolff said. “If all of the income gain goes to the top, there’s not much left to go to the rest of the people.”
Correction: An earlier version of this story included an incorrect timeframe for IRS income data. The most recent figures from the IRS are for 2009.
First Published: October 20, 2011: 9:36 AM ET
ဆန်ရေ ဆိုတဲ့ မြန်မာကားတော့ ကြည့်ဘူးတယ်။
အခုက ဆန်ငွေ ပေါ့။ ဟားဟား။
ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများရဲ့ အမြတ်နဲ့ထုတ်လုပ်မှုများ မြင့်တက်လာပေမဲ့ အလုပ်သမားတွေကတော့ အကျိုးကျေးဇူး မခံစားရဘူးလို့ နယူးယောက်တက္ကသိုလ်မှ စီးပွားရေးပါမေက္ခတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအချက်ကပဲ နိုင်ငံအနှံ့ ပြန့်ပွားနေတဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပေါက်ကွဲထွက်ဖို့ မီးစဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ကြောင်ကြီးရေ အဆိုပါ ပါမောက္ခ ကို ဒို့တွေဘက် လှမ်းကြည့် စေချင်သေးတော့တယ်။ Blackchaw ပြောတဲ့
ဆန်ငွေ ၁% လောက်ကတော့ …..
အကိုကြောင်ကြီးရေ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နဲ့အပြိုင် တဖွဲ့တော့ တိုးလာပြီဗျ။
နယူးယောက်မှာ ကိုကြောင်ကောသွား occupy သေးလား ?? ဒါမှမဟုတ် ကိုကြောင်က 99% ထဲပါနေလို့လား ??
မှားလို့ 1% ထဲပါနေလို့လား ဟီဟိ ။
ဘာ ဘီးစီးနက်စ် လုပ်ပါသလဲ
အာကေ ဘယ်လောက် ဝင်ပါသလဲ
ဒို့ နိုင်ငံ မှာတော့ အောက်ခြေလူတန်းစား က များများလုပ် ကြရ ပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင် တွေကတော့ စားပွဲမှာထိုင် ရင်း ငွေတွေ ဒလဟော ၀င်နေတာ လုပ်ရင်းနဲ့ မလောက် ငတော့ ဘူး ဗျို့ 
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၀.၁% Vs. ၉၉.၉% ဖြစ်လိမ့်မယ်..။
ကျွန်တော်က ၀.၁% မှာမပါပါဘူး..။
သိပ်ကောင်းတဲ့ ပို့ စ်ပါ ။
ဗဟုသုတ ရစရာ တင်ပေးလို့ကျေးဇူးပါပဲ.။